Kungani Umkhiqizo Wevidiyo Ubaluleke Kakhulu nezinhlobo ezi-5 zamavidiyo okufanele uwenze | Martech Zone
U-2015 ube unyaka wokuqopha umlando wevidiyo yomkhiqizo, ngokubukwa kwamavidiyo kukhuphuke ngama-42% kusuka ku-2014. Akuyona yonke le ndaba, noma kunjalo. U-45% wakho konke ukubukwa kwamavidiyo kwenzeke ku umakhalekhukhwini. Eqinisweni, kwikota yokugcina ka-2015, ukubukwa kwamavidiyo weselula kukhule ngokushesha okuphindwe kayisithupha kunokubukwa kwamavidiyo wedeskithophu. Le nenye idatha enikezwe kuMbiko we-Invodo's 6 Video Video Benchmarks Report inabo bonke abathengisi bezizathu zokusebenzisa isu levidiyo… ngokushesha.
Landa umbiko we-Invodo's 2015 Video Video Benchmarks Report
Besisebenza nawo wonke amaklayenti ethu ukuqinisekisa ukuthi isu labo lokuqukethwe lifaka:
Amavidiyo okuchaza - Ukuchaza ngokugcwele izingqinamba eziyinkimbinkimbi imikhiqizo noma izinsizakalo zabo ezisiza ngazo, ukuhlinzeka ukuqonda okungcono, ukuma, ukuzibandakanya nokuguqulwa.
Izinkambo Zomkhiqizo - ukuhamba ngezici zomkhiqizo noma izinqubo inkampani yakho engasiza ngazo.
nobufakazi - akwanele ukubeka umkhiqizo noma insizakalo yakho, kufanele ube namavidiyo amaklayenti anamakhasimende wangempela aveza imiphumela akwazi ukuyithola.
Umqondo Wobuholi - Ukuhlinzeka ngamavidiyo asiza amakhasimende akho ukuthi athole impumelelo embonini yawo noma ngomkhiqizo noma ngomsebenzi wakho kuzokhuphula inani lakho kuwo.
Kanjani-kumavidiyo - amaklayenti amaningi angathanda ukugwema izingcingo nezikrini zokufunda ukwenza izinto. Ukunikezela ngelabhulali yamavidiyo wokuthi kwenziwa kanjani kungasiza amakhasimende akho ukuxazulula izinkinga ngokushesha futhi akhulise ukusetshenziswa kwawo kwemikhiqizo yakho.
Nayi i-Infographic's Infographic, Ividiyo yomkhiqizo nokuqhuma kweselula: 2015 Amabhentshimakhi wevidiyo yomkhiqizo.
Tags: i-invodoividiyo yeselulaukukhula kwevidiyo yeselulaividiyo yomkhiqizoamabenchmark evidiyo yomkhiqizoukukhula kwevidiyoividiyo infographicizibalo zevidiyo
I-Insert.io: Ipulatifomu Yokuzibandakanya Engenakhodi